Somalida Sweden iyo Kuwa Minnesota | Somaliska
Sweden ayaa gudi xaqiiqo raadin ah u dirtay dalka maraykanka qaasatan magaalada Minneapolis gobolka Mennesota. Hadaba gudigaas waxaa xubin ka ahayd Raxma Diriye oo ka tirsan Gudiga kamuunka Stockholm ayadoo mowduuc qiimaha leh oo ay ka qortay safarka sidaan u soo bandhigtay. "Soomaalida u soo haajirta Sweden waxay la kulmaan caqabado badan oo ay ka mid yihiin suuqa shaqada oo adag, luuqada oo aan fududeen iyo dadka Swedishka oo xirxiran taasoo khaar badan ku qasabta in ay u guuraan Ingiriiska iyo Maraykanka ama ajagoo ku nool rajo ah in ay maalin ka guuridoonaan Sweden" Ilaa 1.2 milyan oo Swedish ah ayaa u haajirtay Maraykanka qarnii 1800 ayadoo intooda badan ay degeen gobolka Minnesota, halkaas ayaa waxaa la degay ilaa 45,000 00 Soomaali ah. Sweden qaylo dhaan ayaa ka taagan ku saabsan tirada badan ee qaxootiga Soomaalida ee ka soo cararay dalkoodii ayadoo Soomaalidu ay yihiin dadka ugu shaqo la'aanta badan Sweden taasoo la fahmi karo maadaama uu burburay aasaaskii waxbarashada Soomaaliya balse arinta cajiibka ah ayaa waxay tahay in Soomaalida maraykanka ay yihiin kuwo horumar gaaray oo shaqo iyo ganacsi abuurtay marka loo barbar dhigo kuwa Sweden. Bil ka hor ayaa aniga iyo gudi ka socda Sweden u safarnay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. Dadka maraykanku waa kuwo furfuran oo soo dhaweyn fiican siiya soo galootiga. Dadka cusub waxaa la siiyaa fursado ay noloshooda ku bedelaan. Way fududahay in qofku uu ganacsi furto ayadoo Soomaalidu taas sameeya maadaama ay waayo aragnimo ganacsi hore u lahaayeen. Canshuuraha iyo nidaamka loo marayo barnaamijkaan ayaa ah mid fudud oo sahlan. [caption id="attachment_960" align="alignright" width="126" caption="Raxmo"] [/caption] Safarkeenu waxa uu ku saabsanaa in aan is barbar dhigno Soomaalida Sweden iyo kuwa Maraykanka, qaasatan aniga Soomaali ahaan waxay ii ahayd waayo aragnimo wayn, Soomaalidu waxay ahaayeen kuwo hal abuur leh oo ganacsiyo u furan yihiin. Dadka maraykanka waxay u arkeen in ay yihiin Soomaalidu kuwo faaido ah balse uma arag dhibaato. Dadka aan kula kulmay Minnesota waxay ahaayeen kuwo firfircoon oo goobaha ganacsiga ku firfircoon ayadoo intooda badan ay jaamac ka bexeen ama ay dhigtaan jaamacada Minnesota. Sidoo kale dumarka ayaa aad u firfircoonaa ayadoo aysan saameyn ku yeelan maadaama ay caruur leeyihiin ama ay xijaab xirtaan. ayadooo lagu tixgaliyay xirfadooda oo kaliya. Taas Sweden kuma arkeysid. Waa caado in dadku ay ku dhaganaadaan dhaqankooda marka ay ka fogaadaan dalkooda, dadkii Swedishka ahaa ee u haajiray maraykanka wixii ugu horeeyay ee ay sameeyeen waxay ahayd in ay dhistaan Kaniisad ayadoo raga iyo dumarku si kala gooni ah u fariisan jireen, xitaa dumarka way is dabooli jireen sida xijaabka Muslimiinta oo kale. Waxaan ka soo bartay Minnesota iyo Swedishka u haajiray waa muhiimada dhaqankayga. Waan ku faraxsanahay dib ayaanan u eegayaa. Dhaqan kasta waxyaabo xumaan wuu leeyahay balse waxaa ka badan waxyaabaha wanaagsan ee lagu faano. SvD, Raxma Diriye oo ka tirsan Kamuunka Stockholm.
Somalida Sweden iyo Kuwa Minnesota
Sweden ayaa gudi xaqiiqo raadin ah u dirtay dalka maraykanka qaasatan magaalada Minneapolis gobolka Mennesota. Hadaba gudigaas waxaa xubin ka ahayd Raxma Diriye oo ka tirsan Gudiga kamuunka Stockholm ayadoo mowduuc qiimaha leh oo ay ka qortay safarka sidaan u soo bandhigtay.
“Soomaalida u soo haajirta Sweden waxay la kulmaan caqabado badan oo ay ka mid yihiin suuqa shaqada oo adag, luuqada oo aan fududeen iyo dadka Swedishka oo xirxiran taasoo khaar badan ku qasabta in ay u guuraan Ingiriiska iyo Maraykanka ama ajagoo ku nool rajo ah in ay maalin ka guuridoonaan Sweden”
Ilaa 1.2 milyan oo Swedish ah ayaa u haajirtay Maraykanka qarnii 1800 ayadoo intooda badan ay degeen gobolka Minnesota, halkaas ayaa waxaa la degay ilaa 45,000 00 Soomaali ah.
Sweden qaylo dhaan ayaa ka taagan ku saabsan tirada badan ee qaxootiga Soomaalida ee ka soo cararay dalkoodii ayadoo Soomaalidu ay yihiin dadka ugu shaqo la’aanta badan Sweden taasoo la fahmi karo maadaama uu burburay aasaaskii waxbarashada Soomaaliya balse arinta cajiibka ah ayaa waxay tahay in Soomaalida maraykanka ay yihiin kuwo horumar gaaray oo shaqo iyo ganacsi abuurtay marka loo barbar dhigo kuwa Sweden.
Bil ka hor ayaa aniga iyo gudi ka socda Sweden u safarnay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. Dadka maraykanku waa kuwo furfuran oo soo dhaweyn fiican siiya soo galootiga. Dadka cusub waxaa la siiyaa fursado ay noloshooda ku bedelaan. Way fududahay in qofku uu ganacsi furto ayadoo Soomaalidu taas sameeya maadaama ay waayo aragnimo ganacsi hore u lahaayeen. Canshuuraha iyo nidaamka loo marayo barnaamijkaan ayaa ah mid fudud oo sahlan.
Safarkeenu waxa uu ku saabsanaa in aan is barbar dhigno Soomaalida Sweden iyo kuwa Maraykanka, qaasatan aniga Soomaali ahaan waxay ii ahayd waayo aragnimo wayn, Soomaalidu waxay ahaayeen kuwo hal abuur leh oo ganacsiyo u furan yihiin. Dadka maraykanka waxay u arkeen in ay yihiin Soomaalidu kuwo faaido ah balse uma arag dhibaato.
Dadka aan kula kulmay Minnesota waxay ahaayeen kuwo firfircoon oo goobaha ganacsiga ku firfircoon ayadoo intooda badan ay jaamac ka bexeen ama ay dhigtaan jaamacada Minnesota. Sidoo kale dumarka ayaa aad u firfircoonaa ayadoo aysan saameyn ku yeelan maadaama ay caruur leeyihiin ama ay xijaab xirtaan. ayadooo lagu tixgaliyay xirfadooda oo kaliya. Taas Sweden kuma arkeysid.
Waa caado in dadku ay ku dhaganaadaan dhaqankooda marka ay ka fogaadaan dalkooda, dadkii Swedishka ahaa ee u haajiray maraykanka wixii ugu horeeyay ee ay sameeyeen waxay ahayd in ay dhistaan Kaniisad ayadoo raga iyo dumarku si kala gooni ah u fariisan jireen, xitaa dumarka way is dabooli jireen sida xijaabka Muslimiinta oo kale.
Waxaan ka soo bartay Minnesota iyo Swedishka u haajiray waa muhiimada dhaqankayga. Waan ku faraxsanahay dib ayaanan u eegayaa. Dhaqan kasta waxyaabo xumaan wuu leeyahay balse waxaa ka badan waxyaabaha wanaagsan ee lagu faano.
SvD, Raxma Diriye oo ka tirsan Kamuunka Stockholm.
LA YAAB: “Dhuxul ayuu ku shiday jikada”
Khadra Yuuruf oo ah gabar soomaali ah oo ka howl geli doonta Telefeeyshinka NRK
December 9, 2010 at 19:31
Marnaba ma noqonkaran dadka rer mnsta iyo ku swedan faraq wayn ba u dhaxeya maxa yelay mesha waxa ku jirta xadarinimo tasna wa waxa adunku isku dhafay wana wax loga bahan yahay mesha thanks